Maxay Villa Somalia ku xulatay in shirka lagu qabto Garoowe? | Dhacdo
Maxay Villa Somalia ku xulatay in shirka lagu qabto Garoowe?
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Somaliya, Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa ka hadlay shirkii uu xalay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku baaqay inay Magaalada Garoowe 15-ka bishan isugu yimaadaan Madaxda Dowlad Goboleedyada, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo waxa ay Villa Somalia markaan ku xulatay in shirka lagu qabto Garoowe.
Agaasimaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa sheegay in ujeedada shirka ay tahay, sidii looga shaqayn lahaa doorasho loo dhan yahay oo dalka ka dhacda.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray shir dhammaanba Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, shirkaas oo qayb ka ah dadaalada loogu jiro sidii dalka ay doorasho uga qabsoomi laheyd. Waxa uuna ka qabsoomi doonnaa Magaalada Garoowe ee caasimadda u ah Dowlad Goboleedka Puntland, taariikhdu marka ay tahay 15-ka bishan aynu ku jirno ee February.” Ayuu yiri Agaaasimaha.
Maxay tahay rajada laga qabo shirkani oo la weydiiyay Agaasimaha ayaa tilmaamay in rajo weyn laga qabo in dalka ay doorasho ka qabsoomto.
“Rajo weyn baa laga qabaa runtii dalka inay doorashooyin ka dhacaan, madaxda inay isu timaado oo la shiro, lagana tashado aad bay muhiim u tahay.” Ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Xaashi, Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Somaliya.
Waxa kaloo uu yiri “Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamul Goboleedka Puntland shirar hore oo noocaanoo kale ah ayaa ku qabsoomay. Waa magaalo runtii aad khibrad ugu leh isu soo dhaweynta iyo wadahadalada. Mararkii ugu dambeeyay waxaan xusuusanaa May, 2019 in Garoowe shir leeskugu yimid, Baydhabaa ka sii horeysay, Samareeb baa ka sii horeysay, Xamar baa leeskugu yimid oo heshiiskaasi lagu gaaray 17-kii September. Muhiimadda ugu xoogga badan ee maanta shirkan laga fillayo waxaa weeye inuu noqdo kii ugu dambeeyay ee dadaalkii ugu dambeeyay, uguna xoogga badnaa ee madaxduna gacanta is qabsato, wadankuna uu doorasho ugu dareero.”
Si kastaba ha-ahaatee Puntland ayaan iyaduna soo dhaweyn in shirka lagu qabto Garoowe, iyadoo taasi bedelkeedana soo jeedisay in lagu qabto Caasimadda Muqdisho.